Madax Ball Ball waraabka
PVC Madax Ball Madax
PVC Madax Valve
Shaandheyn otomaatig ah
Saldhigga Shaandhaynta otomaatiga ah
Drippers iyo rusheynta
Qubaysyada Qoryaha Weyn
PVC LayFlat Tuubada iyo Qalabaynta
Qalab Iyo Kuwo Kale
GreenPlains, iyada oo ah mid ka mid ah soosaarayaasha wax soo saarka waraabka ee ugu takhasusay oo la aasaasay 2009, waxay ballan -qaadday inay siinayso xalalka wax -soo -saarka waraabka ee isticmaalayaasha adduunka. Waxaan ku hogaamineynaa warshadaha tayada alaabada ugu sareysa iyo sumcad wanaagsan suuqa caalamiga ah.
Ka dib in ka badan 10 sano oo horumar joogto ah iyo hal-abuurnimo, GreenPlains waxay noqotay hormuudka Shiinaha iyo soosaaraha wax soo saarka waraabka adduunka. Xagga soo -saarka alaabada waraabka, GreenPlains waxay aasaastay tikniyoolajiyadeeda hormuudka ah iyo faa'iidooyinka astaanta. Marka la eego waalka PVC, Filter, Drippers, iyo Valves Mini and Fittings, GreenPlains waxay noqotay Shiinaha mid ka mid ah sumadaha ugu horreeya.
GreenPlains waxay ku takhasustay R&D, wax soo saarka, iyo suuqgeynta alaabada waraabka. Aqoon -isweydaarsiga wax -soo -saarka wuxuu leeyahay in ka badan 400 caaryaal. Waxsoosaarka waxaa ka mid ah PVC Ball Valves, PVC Balanbaalis Valves, Valve Check PVC, Valves Foot, Valves Control Valves, Valve Air, Filter, Drippers, Sprinklers, cajalad faleebo, iyo Valves Mini, Fittings, Clamp Saddle, Injectors Injectors Venturi, PVC LayFlat Tubbada iyo Qalabaynta, Qalabyada iyo alaabo kale oo badan. Tiro badeecooyin iyo farsamooyin ah ayaa helay shatiyada qaranka.
Sida Aynu Ku Guuleysanno
Kooxda R&D ee Xirfadlaha ah, waxaan ku siinnaa adeeg hal-joog ah naqshadeynta badeecada, naqshadaynta caaryada & dhisidda soosaarka alaabta;
Waxaan ka helnay shahaadada nidaamka tayada ISO9001 SGS. Waxaan u qalmin nidaamyada maareynta horumarsan iyo kooxaha maareynta oo casri ah. Waxaan la soconnaa oo aan la soconnaa geedi socodka oo dhan min meelaynta PO ilaa gaarsiinta alaabada amar kasta iyada oo loo marayo ERP, MES, nidaamka maareynta bakhaarka iyo nidaamka tayada ISO9001; waxaan xakameynaa tayada badeecad kasta waxaanan siinnaa badeecado iyo adeeg qiimo jaban leh macaamiisheena adduunka oo dhan.
Yaan nahay Yihiin?
GreenPlains, iyada oo ah mid ka mid ah soo saarayaasha wax soo saarka waraabka ee ugu takhasusay oo la aasaasay 2009. ka go'an inay siiso xalalka wax soo saarka waraabka isticmaalayaasha adduunka. Waxaan ku hogaamineynaa warshadaha tayada alaabada ugu sareysa iyo sumcad wanaagsan suuqa caalamiga ah.
Halkee u na hel?
Aagga Warshadaha Bafang, Dacheng, Magaalada Langfang, Gobolka Hebei, Shiinaha
Su'aalaha ku saabsan alaabtayada ama qiimeeyaha, fadlan noo dhaaf emailkaaga annaguna waan la xiriiri doonnaa 24 saac gudahood.
Laga soo bilaabo Instagram
Waxaan u isticmaalnaa cookies si kor loogu qaado naqshadeynta mareegahayaga. Markaad sii wadato booqashadaada mareegaha, waxaad oggolaatay adeegsiga kukiyada. [Macluumaad dheeraad ah]OK